Waa kee horyaalka uu ka ciyaari doono Robert Lewandowski haddii ay xagaagan iska iibiso Kooxda Bayern Munich? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waa kee horyaalka uu ka ciyaari doono Robert Lewandowski haddii ay xagaagan iska iibiso Kooxda Bayern Munich?
May 3, 2021 at 12:30 Waa kee horyaalka uu ka ciyaari doono Robert Lewandowski haddii ay xagaagan iska iibiso Kooxda Bayern Munich?2021-05-03T12:30:07+02:00 CAYAARAHA
(Munich) 03 Maajo 2021. Waxaa shaaca laga qaaday horyaalka ugu macquulsan ee uu ka ciyaari doono Robert Lewandowski haddii ay xagaagan iska iibiso Kooxda Bayern Munich.
Sida uu warinayso Wargeyska Sport Bild ayaa warinaya in haddii ay Kooxda Bayern Munich iska iibiso weeraryahankeeda Robert Lewandowski xagaagan uu u dhaqaaqi doono koox ka ciyaarta horyaalka Premier League.
Robert Lewandowski halka uu ku wajahan yahay ayaa laga yaabaa inay tahay dalka England, maadaama Sport Bild uu warinayo in wakiilka weeraryahanku uu cadaadis saari doono Kooxda Bayern Munich si uu heshiis qaali ah ugu kordhiyo naadiga ama uu ka iibiyo koox bixin karta mushaharkiisa sare, waxaana ugu badan in kooxda lacagaha ay dalbanayaan siin karta ay tahay mid ka dheesha horyaalka Premier League.
32-sano ayaa weli ah mid ka mid ah gooldhaliyaasha ugu halista badan Adduunka, isagoo dhaliyay 36 gool oo horyaalka Bundesliga ah 26 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkaan, halka uu sidoo kale shaqo culus ka hayay tartanka Champions League.
Robert Lewandowski ayaa heshiiskiisa haatan ee Kooxda Bayern Munich waxa uu ku eg yahay sanadka 2023-ka.
« Wasiir Beyle oo la shiray Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika
Jubaland: Waan ka qayb-gelaynaa shirka Rooble ku baaqay »